HIGGAADDA AF SOOMAALIGA – Casharka 6^aad | JAMHURIYADDA
Home Ciyaaraha iyo Dhaqanka HIGGAADDA AF SOOMAALIGA – Casharka 6^aad
HIGGAADDA AF SOOMAALIGA – Casharka 6^aad
Hadalka iyo Qoraalka
Waxaa mihiim ah in qoraha uu aqoonsado in hadalka afka iyo qoraalka farta ay wax kala duwan yihiin. Aqoonta Afka hooyo qur ah kuuguma deeqayso aqoonta habsamiuqorista farta. Sidaan horey u soo sheegnay, qoraalka farta iyo higgaadda toosan waa wax la barto sababtoo ah xeerar u gaar ah ayay leedahay.
Hab Kooban iyo Hab Fidsan
Hadlka waa wax dabiici inuu qokfa degdejiyo markuu hadlaayo, sidaas daraaddeed ereyada ayaa isku koobmaaya. Marka qoraalku ay tahay waxaa diiradda la saaraa inuu akhristaha si wanaagsan u frahmo qoraalka.
Arrinkan ayaa wuxuu inagu duwaayaa waxa loo yaqaan: HABKA KOOBAN iyo HABKA FIDSAN. Hadalka wuxuu u badan yahay Habka Kooban, qoraalkana labada waa la adeegsadaa inkatoo Habka Fidsan aad loo adeegsado. Tusaale muujinaaya labada hab:
1. Cali wuxuu rabaa inuu meel fog aado, waa hab kooban
Isla weertan waxaa lagu qori karaa habka fidsan.
2. Cali waxa uu rabaa in uu meel fog aado. Labaduba waa sax.
Weerta 2 haddaad u fiirsato magacyada (Cali, Meel) iyo falka (Aado) iyo tilmaamaha (Fog) isma beddelin waxa aad isbeddelay waa qurubyada[i] iyo
magacuyaallada dhiman (Waxa, in, uu, oo iyaguna uun qurub ah).
3. Warqadahaan qoraayaa ee Mahad ha daabaco
3b. Wrqadaha ayaa aan qoraayaa ee Mahad ha daabaco
4. Waxbaan helay ee yaa raba?
4b. Wax baa aan helay ee yaa raba? Labada habba waa sax.
Qodobka, Tilmaamayaasha, Dibkaabayaal, iwm
Magacyada markaad qoraysid waa khasab inaad raaciso qodobka sida ka, ta, ga, a, da, ha, sha.. Sidaan soo aragnay qodobka keliya ma aha waxa lagu nudo magaca. Tusaalloyinkan eeg:
Buuggayga ii soo dhiib Magaca: bug kayga waa tifaftire lahaansho, sida kaaga, keeda, kiisa, kiinna, kooda.
Buuggaas ii soo dhiib. Magaca: bug
Qoraayaalkaas maxay rabaan? magaca: qoraayaal
Hooyooyin ayaa ina sugaaya. magaca: hooyoyin
Ninkee yimid manta?-kee waa dibkabe weydiimeed sida –tee,
Sidaan aragno magaca gadaal (Dhanka midig) ayaa wax looga kabi karaa. Horey (Bidix) maya. Teeda kale u fiirso qodobka wuxuu raaca keliya magacyada guud oo aan ahayn gaarka sida macayda dadka, sababtuna qodobka hawshiisa waa inuu magaca ku kordhiya aqoonsi. Magacyada gaarka ah ee dadka ( Deeqa, Maka, Cali, Mhad, iwm) waa la yaqaannaa. Marka badanaaba uma baahna qodob ku kordhiya aqoonsi. Marar dhif ah, si loo kala bixiyo laba magac gaar ah waa la adeegsan karaa, tusaale eeg 8. Magaca laguma kabi karo xiriiriyeyaasha ah: iyo ama.
Yaad doonaysa Cali ama Saaqa?
Cali iyo Saaqa, kee baad doonaysaa?
Caliga aqalka ku jira ama kan baxay, keed ka hadlaysaa?
Xitaa xiriiriyaashan (Oo iyo ee) waxaa wanaagsan inaan wax lagu nudin/kabin laakin waxaa ka sii daran inaan laysku khaldin. Labadan xiriiriye waxay isku xiraan laba magac ama laba weer.
Oo waxuu xiriiriyaa laba weer.
1. Cali waa nin fariid ah.
2. Cali waa nin dadaal badan. U fiirso labadan weer waa laba weer oo ebbyoon oo mid waliba iskiisa u istaagi kara.
3. Cali waa nin fariid ah oo dadaal badan.
4. Baraha oo ardadii wax baraya ayaan arkay.
Oo Waxuu xiriiriyaa laba weer amar ama laba fal oo iskumar la qabtay.
Soo dhakhso oo guriga imow.
Adiga oo dugsiga u socda miyuu ku joojiyay?
Ee. Markuu xiriirinaayo laba magac waa sidan:
Jamhuuriyadda Midaysan ee Soomaaliya.
Boqortooyada Carabeed ee Sucuudiga.
Daarta dheerr ee Wasaaradda.
Guriga gaaban ee Mahad.
Runtii kuwan laba magac ma aha balse Naxwe ahaan waa weer magaceed, balse waxay ugu muuqan karaan laba magac.
Ee Waxuu xiriiriyaa laba weer oo aan xor ahayn.
Wiil yar ee dhiirran Wiil yar iyo Wiil dhiirran ma aha laba weer oo ebbyoon oo mid waliba iskeeda u istaagi karo.
Nin wanaagsan ee deeqsi ah. Halkanna kama heli kartid laba weer oo ebbyoon,
Ee Waxuu xiriiriyaa weer tebineed iyo weer amar ah. Weeraha tebineed badanaaba waxay adeegsadaan: WAA, AYAA, BAA, WEEYE.
Meeshan waa gudcur ee iska jir
Xafiiska Cawil wuu furan yahay ee gal
Mararka qaarkood dhammaadka weerta ayaa lagu kabaa/nabaa EE:
Adigu aqalka iska aad, anigaa u sheegaayee
Waxba ha u sheegin ha seexdee
Ee Waxuu xiriiriyaa laba weer oo mid ay tahay Diidmo midna Caddayn:
Cali ma cashayn ee wuu seexday ma waa qurub diidmo
Cali ma seexan ee Deeqa ayaa seexatay.
[i] [i] Qurub Af ahaan waa magac lab ah, micnihiisuna waa gabal yar. Naxwe ahaan Qurub waa curiyayaal aan keligooda micne lahayn balse waxay lagama maarmaan u yihiin dhismaha weerta. Waxaa ka mid ah: ayaa/baa/waa/ma/ na..iwm. Tusaale: 1.Cali geesi, micneheeda ma dhamma. Eeg marka lagu daro qurubka waa
2. Cali waa geesi.
Previous articleWashington: Soomaaliya oo Dunida La Hortagtay Qaran Xisaabtami Kara
Next articleHIGGAADDA AF SOOMAALIGA – Casharka 7aad (Dhammaad)